Intonga yocingo lwentsimbi kunye nokulungisa abavelisi - China Intonga yocingo yentsimbi kunye nokulungisa ababoneleli kunye neFektri
I-ASTM A416 Steel Strand yeShishini
I-strand yentsimbi yimveliso yentsimbi kunye nentsimbi eyenziwe ziingcingo zentsimbi ezininzi, ezinokwahlulwa zibe ngumtya wentsimbi exineneyo, umtya wentsimbi engafakwanga, umtya wentsimbi kwalenza njalo njalo. Maleko kwalenza, zinc-aluminiyam ingxubevange umaleko, aluminiyamu enxibe umaleko, ubhedu enxibe umaleko, epoxy camera umaleko, njl zingongezwa kumphezulu wentsimbi yekhabhoni njengoko kufuneka.
Q235 10mm Steel Wire Intonga
intonga yentsimbi yentsimbi ikwabizwa ngokuba yintonga yocingo, ucingo lwesinyithi, olusetyenziswa ngokubanzi kumacandelo oomatshini, kwimizi-mveliso, kwimizi-mveliso ye-elektroniki, kwizixhobo zesinyithi nakwabanye. Ucingo Gauge: Φ 5.5-18mm, izilinganisi elungelelanisiweyo zamkelekile. Zininzi iindidi zeentonga zentambo. Iintonga zentsimbi zecarbon zentsimbi zaziwa ngokuba ziingcingo ezithambileyo, kunye neentsimbi zecarbon zentsimbi zentsimbi ezaziwa ngokuba ziingcingo ezilukhuni. Iintonga zocingo zisetyenziswa ikakhulu njengezinto zokuzoba, kwaye zinokusetyenziswa ngokuthe ngqo njengezinto zokwakha kwaye zenziwe ngamalungu oomatshini. Iintonga zentsimbi ezingenazingcingo zisetyenziselwa ukwenza ucingo lwentsimbi olungenasici, ucingo lwentsimbi olungenasici, ucingo olucaphukisayo olungenasiphelo kunye nentsimbi yentsimbi. Ngenkqubela phambili yetekhnoloji yokuvelisa, isikwere, i-hexagonal, ifeni emile kunye nezinye iintonga zentsimbi ezikhethekileyo; Umda ophezulu we-diameter wandisiwe waya kuma-38 mm; Ubunzima beplate bonyuke ukusuka kwi-40-60 kg ukuya kwi-3000 kg. Ngenxa yokuphuhliswa kwetekhnoloji entsha yonyango lobushushu emva kokuqengqeleka, isikali kumphezulu wentonga yocingo ngokucacileyo sincitshisiwe, kwaye ulwakhiwo kunye neepropathi ziphuculwe kakhulu.